German Lufthansa gbatịrị mmachibido iwu ụgbọ elu Iran ruo March 28
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » German Lufthansa gbatịrị mmachibido iwu ụgbọ elu Iran ruo March 28
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Lufthansa nke German ụgbọ elu kwupụtara na ọ gaghị arụ ọrụ ụgbọ elu na Tehran, Iran ruo mgbe Machị 28. Dịka ụgbọelu si kwuo, a na-ewere usoro ahụ maka 'ihe nchekwa'.
Linelọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na mkpebi a mere n'ihi na ekwenyeghị na ikuku ikuku dị na mpaghara ọdụ ụgbọ elu Tehran, yana dum, dị mma. Yabụ, ụgbọelu German ahụ kwụsịrị ịgbatị ụgbọ elu na Tehran na ụgbọ elu Iran ruo Machị 28, 2020.
Tupu mgbe ahụ, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ kwụsịrị ụgbọ elu Tehran na Iran ruo Jenụwarị 20.
Na Jenụwarị 8, Ukraine International Airlines ụgbọ elu ndị njem, nke si Tehran na-efe efe na Kiev, ndị mgbagha ụgbọ elu ndị Iran gbagburu obere oge ka ha si n'ọdụ ụgbọ elu Tehran pụọ. Mmadụ 176 niile nọ n’ụgbọ ahụ nwụrụ.
Mgbe agọnarịrị ntinye ya na ịnwa ịkọ ụta maka ihe mberede ụgbọelu Ukraine na USA, emesịrị amanye Iran ịnakwere ọrụ ya maka ịgbatu ụgbọ elu njem na igbu mmadụ 176.
Mgbe ụgbọelu ndị Ukraine ahụ dara, ụgbọ elu mba ofesi malitere itinye mmachi na ụgbọ elu na Iran.
agbasa ozi ọma Ukraine International Airlines